Permalink 1y31nso5x7bsz သည် ဇန်န၀ါရီ 6, 2012 6:58pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။
ဘုန်းကြီးကျောင်းတို့ သာသနရိပ်သာတွေမှာ် (မင်္ဂလာဆောင်) အခမ်းအနားကျင်းပတာဟာ ဖြစ်ကို မဖြစ်သင်.ပါ။ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကလဲမကြားဘူးပါ။
Permalink minkhantnaing သည် ဇန်န၀ါရီ 6, 2012 9:51pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။
မသင်.တော်ဘူးလို.တော.ထင်တာဘဲ ဒါပေမဲ.တဖက်ကပြန်ကြည်.၇င် ခန်းမတွေဆောင်တာနဲ.ဘုန်းကြီးတွေဆွမ်းကပ်၇တော.ကုသိုလ်များ၇မလားဘဲ အပြစ်ဖြစ်မဖြစ်ကတော. နှလုံးသွင်းမှု.(ယောနိသောမနသိကာယ)အပေါ်မှုတည်မယ်နဲ.တူတယ် ဘု၇ားလက်ထက်ကတော.၇ှိမယ်မထင်ပါဘူးဘယ်ဆ၇ာတော်ဟောတာမှမနာဘူးသေးဘူး အခုအချိန်ထိပေါ.
Permalink ကိုကျော်သန်း သည် သြဂုတ် 28, 2013 10:31pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။
အနောတိုစီက ဘန်ကြီးကျောင် တွေမြင်ရတယ် ဒီလိုပဲဖြစ်နေတယ် မဖြစ်သင့်ပါ